Griezmann oo xaqiijiyay in uusan meelna uga socon Atletico - BBC News Somali
Griezmann oo xaqiijiyay in uusan meelna uga socon Atletico
5 Juunyo 2017
Laacibka kooxda Atletico Madrid, Antoine Griezmann, ayaa sheegay in xilli ciyaareedka soo socda uu kooxdaasi sii joogi doono oo haddii uu kooxda isaga tago ay tallaabadaasi noqon doonto mid nacasnimo ah kaddib markii la diiday racfaankii ay kooxdu ka qaadatay xayiraaddii soo iibsiga ciyaartoyda ee lagu soo rogay.
26 jirkan weerarka ka dheela ayaa lala xiriirinayay inuu u wareegi doono kooxda Manchester United, ka hor inta aanay isla kooxdaasi dabcin dalabkooda ay kula saxiixan lahaayeen.
Racfaanka ay Atletico Madrid ka qaadatay xayiraadda laga saaray inay ciyaartoy la soo wareegto ee ay ku mutaysatay jabinta shuruucda FIFA ee saxiixa ciyaatoyda da'da yar ayaa waxaa diidday Maxkamadda Caalamiga ah ee Ciyaaraha.
"Waqti adag ayey u tahay kooxda," ayuu Griezmann u sheegay TV Faransiis ah.
Laacibkan u dhashay dalka Faransiiska ayaa u sheegay TV-ga Telefoot inuu go'aansaday inuu lasii joogo kooxda Spanishka kaddib markii ay go'aan wada gaareen lataliyihiisa ciyaaraha Eric Olhats.
Waxa uu ciyaaryahankan horay ugu sheegay barnaamijka TV-ga Faransiiska ee Quotidien in tobankiiba 6 ay tahay fursadda uu xagaagan ugu biirayo kooxda Manchester United.
Maadaama Arletico Madrid aanay ciyaartoy cusub la soo wareegi karin tan iyo 1-da Janaayo 2018, waxaa la filayaa inay ciyaaryahan Griezmann ay usoo bandhigi doonto qandaraas cusub - iyadoo midka haatan uu kooxdaasi kula jiro uu ka mid yahay qodob sheegaya in 100 milyan oo euro lagu fasixi karo.
Atletico iyo Real Madrid ayaa July 2016 waxaa laga mamnuucay inay laba jeer oo ah xilliga la kala iibsado ciyaartoyda aanay la soo wareegi karin ciyaartoy, sidoo kalana waxaa la saaray ganaax lacageed kaddib baaritaan FIFA ay ku sameysay oo khuseeya ciyaartoy da'doodu ka yar tahay 18 sano oo u dheelay Atletico intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2014 iyo Real Madrid intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2014.
'Waxaa la ii guuriyay si aan hadiyad ugu noqdo nin dugsiga sare dhammeeyay'
Inta jeer ee Farmaajo iyo Rooble ay is khilaafeen
TOOS Halkan ka daawo waxa khuburrada ay kusoo arkeen "Ceelka Cadaabta"
Shan arrimood oo hay'adda ICG ay ka dhahday khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Weriyihii 3-da jeer wareystay Usaama Bin Laadin
4 filim oo uu Salman Khan diiday balse uu Shahrukh Khan magac weyn ku helay
11 Sebtembar 2021
Fahad Yaasiin: Taliyaha awoodda badan ee aan wax badan laga ogeyn
6 Sebtembar 2021
Lix arrimaad oo ku saabsan Hayadda NISA ee xuddunta u noqotay khilaafka siyaasadeed
7 Sebtembar 2021
'Sawirro argagax leh" oo muujinaya ilaalada xudduudaha Mareykanka oo fardo saaran oo ceyrsanaya muhaajiriin
Muxuu yahay xannuunka uu Maraykanka ku wareersanyahay ee ninka sirdoonka ah ku dhacay?
Muxuu Shiinaha diyaar ugu yahay inuu dunida ka difaaco badda Koonfurta?